BRAZIL VS SOMALIA 3-2: Somalia oo looga badiyay kulan ay dadaal muujisay + Sawirro – Gool FM
BRAZIL VS SOMALIA 3-2: Somalia oo looga badiyay kulan ay dadaal muujisay + Sawirro
Raage October 8, 2017
(Tunis) 08 Okt 2017 – Somalia iyo Brazil oo ciyaaray ayaa waxaa 3-2 ciriiri ah ku badisay Brazil Koobka Adduunka kubad cag yaraha oo haatan ka soconaya dalka Tunisia.
Somalia oo ciyaarta 2-1 ku hoggaaminaysa ayaa waxaa iskugu xigsadey roose loo taagey laacib ka mid ah iyo rigoore markiiba laga dhigay taasoo ciyaartii ka lumisay miisaankii.
Xulka Somalia oo ay wax u dhintay ninka la dheer yahay kuna sii niyad jabtay rigoorihii deg degga ahaa ee xigey ayaa la oran karaa runtii ma ciyaar xumayn, waloow ay woxoogaa waaya aragnimadu ku yarayd oo ay ahayd inay ilaa xad is dejiyaan.
Somalia ayaa Guruubka C kula jirta xulalka Brazil, Bosnia Herzegovina iyo Ruushka iyadoo guruubkiiba laga doonayo 2 kooxood oo usoo gudubta bug-baxda.
Somalia oo kulankan ugu yaraan barbarro u qalantey ayaa soo baxda haddii ay badiso labada kulan ee xiga ee u harsan, waase buur dheer.
Somalia waxaa u saamaxey inay koobkan ka qaybgasho inay ka mid tahay dalal fara ku tiris ah oo horay kala qabsaday ciyaarta noocan ah oo iyada oo dhami caalamka kusoo biirtay Nofeembar 2013, iyadoo dufcaddii ugu horreeysey ee caalami ah bishii Maarso 2015 lagu qabtay dalkaasi Maraykanka oo isla isagu ku guulaystey kaddib markii uu 5-3 uga badiyey Mexico.
GOOGOOSKA: Germany vs Azerbaijan 5-1 (Jarmanka oo Azeriyiinta edbiyay)
Mustafi oo ka dhaawacmay Arsenal